Hamro Kantipur | राष्ट्रपति सीकाे चेतावनी चीन न सकैकाे दबावमा बस्छ न कसैलाई थिचोमिचो गर्छ ! राष्ट्रपति सीकाे चेतावनी चीन न सकैकाे दबावमा बस्छ न कसैलाई थिचोमिचो गर्छ !
राष्ट्रपति सीकाे चेतावनी चीन न सकैकाे दबावमा बस्छ न कसैलाई थिचोमिचो गर्छ !
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनले कसैलाई थिचोमिचो नगर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको १ सयौं वर्षगाँठ मनाउने क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । त्यसैगरी उनले अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै कसैसँग चीन नदब्ने पनि बताए ।
१९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिसिपी) गठन भएको थियो । लामो गृहयुद्धपछि १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । त्यसयता देशमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । एजेन्सी